Baicalin bụ ihe dịpụrụ adịpụ nke ewepụtara tumadi na mgbọrọgwụ skullcap (Scutellaria baicalensis Georgi (Lamiaceae)). Baicalin ntụ ntụ bụ odo akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na nta isi na ilu uto. Ọ nwere ọrụ ndu dị ukwuu, antibacterial, diuretic, mgbochi mkpali na mmetụta ndị ọzọ, ma nwee usoro mgbochi ọrịa kansa siri ike na arụmọrụ physiological. Ọ na-arụkwa ọrụ dị mkpa na ọgwụ na-agwọ ọrịa. Ultraviolet absorption nke baicalin nwere ike wepu oxygen free radicals ma gbochie nhazi nke melanin. Ya mere, enweghi ike iji ya na ogwu, kamakwa na ihe ịchọ mma, nke bụ ezigbo ngwa ọrụ ịchọ mma.